KADOMA, Zimbabwe (Thomson Reuters Foundation) - In life, few knew him. Yet in death, 33-year old Ndumiso Ngwenya became the talk of the town - a leper who had spent his days under strict lock and key, one of Zimbabwe's hidden disabled.
HARARE (Thomson Reuters Foundation) - It's no joke being a comedian in Zimbabwe.
HARARE (Thomson Reuters Foundation) - Sekai Hwangwa was asleep when soldiers carrying guns burst into her home in Zimbabwe's capital during a deadly crackdown on anti-government protests this month and beat and raped her.
HARARE, Zimbabwe (Thomson Reuters Foundation) - At a makeshift Pentecostal church in one of Harare's poorer western suburbs, dozens of congregants dance during the Sunday service, their hymns echoing off the corrugated iron roof.